နိုဝငျဘာ, 1913 ။
ရယ်သံများစိတ်နှင့် inarticulate အသံအသံမှတဆင့်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုသဘောထားကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခြေအနေကသူ၏ရယ်မောခြင်းပေါ်၌ရယ်မောခြင်း၏အမျိုးမျိုးနှင့်သဘာဝမူတည်; အဆိုပါတဟီဟီရယ်, titter အဖြစ်ရိုးရှင်းပြီး exuberant လူငယ်၏, gurgle; ရက်ရက်ရောရောကောင်းသောသဘာဝတရား၏, mellow ချိုမြိန်ငွေရောင်, ဒါမှမဟုတ်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာရယ်, ကဲ့ရဲ့, ကဲ့ရဲ့ခြင်း, sarcasm, အမြီးအမောက်, လှောင်ပြောင်ရှုတ်ချခြင်း၏ရယ်မော။ ထိုအခါအဓမ္မ၏စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သောရယ်မောခြင်းလည်းမရှိ။
မိန့်ခွန်းကပီသသောပေးသောစိတ်ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အညွှန်းကိန်းဖြစ်သကဲ့သို့ရယ်သံများ, ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးညွှန်ပြချက်များနှင့်ရယ်တတ်သူတဦးတည်း၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ပေါင်းစပ်အဖြစ်သေချာသည်။ ဦးခေါင်း, အသံပြာ, သို့မဟုတ်အခြားခန္ဓာကိုယ်အယှက်တစ်ဦးချမ်းအေး, တစ်ဦးရယ်၏ချောမွေ့ Round ဖြစ်ပေါ်လာအောင်နိုငျသျောလညျးထိုကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်အဆီးအတားကြောင်းရယ်မောသို့ဝင်သောအရာဝိညာဉျတျောနှင့်ဇာတ်ကောင်ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူး။
အဆိုပါရယ်မော၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါကသူတို့ကိုကျော်လေတပ်ပေါ်တွင်အသံကွိုးနဲ့အသံအိုး၏အရေးယူမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ ဒါပေမယ့်ရယ်၏အချိန်မှာစိတ်သဘောထားဟာရယ်မောဖို့စိတျဓာတျကိုပေးတော်မူ၏, ထိုရယ်မော၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည့်အတွက်သံကိုယ်ထည်နှင့်အရည်အသွေးအားငါပေးမည်ကဲ့သို့သောကြွက်သားများနှင့်အသံလှုံ့ဆော်မှုအတင်းအကျပ်မှသကဲ့သို့အာရုံကြောစနစ်အပေါ်ပြုမူ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
စိတ်ထဲမပါဘဲအဘယ်သူမျှမရယ်လည်းမရှိ။ တဦးတည်းရယ်နိုင်စေရန်စိတ်ကိုရှိရမည်။ တစ်ခုကလူထုံနေတဲ့ဆူညံသံကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရယ်မောလို့မရပါဘူး။ တစ်ဦးကမျောက်ကိုတုပပွီး grimaces လုပ်ပေမယ့်ရယ်မောလို့မရပါဘူးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကြက်တူရွေးရယ်မောခြင်း၏အသံတုပနိုငျ, ဒါပေမယ့်သူကရယ်မောလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာအကြောင်းကိုရယ်မောဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အရာကိုသိတော်မမူ နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုတစ်ကြက်တူရွေးရယ်မောခြင်းကိုတုပသောအခါသိတယ်။ Birds ဂိမ်းခုန်ခြင်းနှင့် flutter နှင့် twitter နေရောင်ခြည်အတွက်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရယ်မောခြင်းလည်းမရှိစေခြင်းငှါ, ကြောင်နှင့်ပေါက်, လိပ်, ခုန်အုပ်လိုက်ပြီးပြုတ်သို့မဟုတ်ဖော purr စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ရယ်မောလို့မရပါဘူး။ ခွေးနှင့်ခွေးပေါက်စ prance and Play အားကစားအတွက်ခုန်ခြင်းနှင့်အခေါက်, ဒါပေမယ့်သူကရယ်မောဖို့သူတို့ကိုအားပေးပြီးမှမပါနိုင်ပါ။ ခွေး "ဒီလိုထောက်လှမ်းရေး" ဟုခေါ်ဘာနဲ့တစ်ဦးကို သိ. ကြည့်ဖြစ်ဟန်အဘယ်အရာနှင့်အတူလူသားတစ်ဦးမျက်နှာသို့ကြည့်သည့်အခါတခါတရံကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသူပျော်စရာနားလည်နိုင်ကပြောသည်နှင့်ရယ်မောဖို့ကြိုးစားနေလျက်ရှိ၏ ဒါပေမဲ့သူမဟုတ်နိုင်။ တိရစ္ဆာန်ရယ်မောလို့မရပါဘူး။ အချိန်များတွင်တချို့ကတိရိစ္ဆာန်များအသံအသံတုပနိုငျ, ဒါပေမယ့်စကားလုံးတွေကိုတစ်ဦးနားလည်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအများဆုံးသာတစ်ဦးပဲ့တင်သံနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကခွေးစကားများမဟုတ်သလိုရယ်မောခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လို့မရပါဘူး။ မှာအကောင်းဆုံးသူသည်မိမိသခင်၏အလိုဆန္ဒထင်ဟပ်နှင့်အချို့သောဒီဂရီအတွက်အလိုဆန္ဒတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။
ရယ်သံများမမျှော်လင့်ဘဲမသင့်တော်သော, မှော, မသင့်လျော်, incongruousness ၏တစ်ခုခုထုတ်ဖော်ပြသသောအခြေအနေ, စိတ်ကိုအားဖြင့်အမြန်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်၏အလိုအလျောက်စကားရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေမှအချို့သောဖွ, ဒါမှမဟုတ်အရေးယူအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်စကားအားဖြင့်ပေးထားပါသည်။
ရယ်မောခြင်း၏အပြည့်အဝအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်နှင့်မှော, incongruousness တစ်ခွအေနကေို unexpectedness နားလည်ရန် Quick အပြင်, အလွယ်တကူစိတ်ကိုရမယ်ရယ်မောနိုင်စေဖို့။ ၎င်း၏စိတ်ကူးယဉ်ဒြေဖွံ့ဖြိုးရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိလျှင်, စိတ်ကိုတစ်ခုထက် ပို. အခွအေနေမြင်လျက်ထို့ကြောင့်စစ်မှန်သောနျဖိုးထားကင်းမဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသည့်အခါဒါပေမယ့်စိတ်ထဲလျင်မြန်စွာကြောင်းဖြစ်ပျက်မှုကအခြားရယ်စရာကောင်းသောကွိနှင့်အခြေအနေများကနေပုံဖော်နှင့်သဟဇာတအတူ incongruities ဆက်စပ်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့လူတွေကအခြေအနေကိုနားလည်ရန်နှင့်ဟာသအတွက်အချက်ကြည့်ဖို့အမြန်ဖြစ်ကြသည်။ အခြားသူများကအခွအေနကိုနားလည်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမပါဘဲသူတို့ကအခွအေနေအကြံပြုသို့မဟုတ်ကြောင့် Co-ဆက်စပ်သောအရာကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုမမြင်နိုင်, သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာတွေ့အတွက်ဟာသတစ်ခုအတွက်အချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရယ်စရာအခွအေနေကြည့်ဖို့နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဖင်များမှာ အခြားလူများရယ်မောနေကြသည်။
ရယ်သံများအသက်ရှည်သမျှအခြေအနေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၌၎င်း, အထူးသဖြင့်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ monotonous ဖိအားနဲ့အခက်အခဲတွေကြိတ်အတွက်နည်းနည်းရယ်မောခြင်းရှိပါသည်။ ဘဝရှင်းလင်းသောတည်ရှိမှု, ထိုပြည်ကိုအုပ်စိုးသည့်အခါစစ်ပွဲနှင့် PES-tilence မောင်းရမယ့်ကိန်းသေရုန်းကန်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အခါမှာအသေသတ်ခြင်းကိုမီးနှင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်မြေလှုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ရိတ်စပါးရိတျသောအခါ, ပြီးတော့ကြောက်အားနှင့်အခက်အခဲများနှင့်အသက်တာ၏အခက်အခဲများသာမြင်ကြသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများအထဲကဆောင်ကြဉ်းနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်စိတ်နှင့် Quick ၏ခံနိုင်ရည်နှငျ့ခှနျအားအတင်းအကျပ်။ စိတ်ကိုဤအရည်အသွေးတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများကျော်လွှားကတီထွင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲလည်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်လိုအပ်ပါသည်။ စိတ်ကိုရယ်မောခြင်းဖြင့်မှန်မှန်, လွယ်ကူခြင်း, ကျေးဇူးတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ရယ်သံများစိတ်ငြိမ်ဝပ်နှင့်ကျေးဇူးတော်အဘို့လိုအပ်ပေသည်။ အဖြစ်မကြာမီအသက်တာ၏ရှင်းလင်းသောအလိုကိုလည်းပြည့်ထောက်ပံ့နှင့်ပဒေသာအခွင့်မပေးကြရန်စတင်နေကြသည်အဖြစ်, ရယ်မောခြင်းလာပါတယ်။ ရယ်သံများစိတ်ကို unbend စေသည်နှင့်၎င်း၏တောင့်တင်းကွာကြာပါတယ်။ ရယ်သံများအသက်တာ၌အလင်းနှင့်ရူ့ကြည့်ရှုရန်စိတ်ကိုကူညီပေးသည်အဖြစ်အမှောင်ထဲမှာနှင့်အအေး။ ရယ်သံများလေးနက်, ပဲ့နှင့်အဓမ္မအရာနှင့်ယင်း၏ရုန်းကန်ပြီးနောက် strain ကနေစိတ်ကိုသက်သာ။ ရယ်သံများအသစ်သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်စိတ်ထဲကိုက်ညီ။ ရယ်မောဖို့ပါဝါလေးလည်းအသုံးပြုပုံစိတ်ကိုက၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုသက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီးအခက်အခဲများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပင်စိတ္တဇ Melancholie နှင့်တားဆီးများနှင့်မကြာခဏဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါပျောက်မောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူတရယ်မောခြင်းမှအလွန်အကျွံအာရုံစိုက်မှုပေးသည်သောအခါရယ်မောခြင်း၏မတ်ေတာလေးနက်မှု, တာဝန်များ, တာဝန်များနှင့်ဘဝ၏လုပျငနျးကိုတန်ဖိုးထားထံမှသူ့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်အမှုအရာများ၏ရယ်စရာအခြမ်းကိုတွေ့မြင်နှင့် rollicking, jolly ကောင်းသောသူချင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, လွယ်ကူပြီးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်သဘောကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူရယ်မောနေတဲ့အပျြောအပါးစေရန်ဆက်လက်အဖြစ်ဒါပေမယ့်သူကပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်အသက်တာ၏ပဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်မသင့်တော်သောဖြစ်လာသည်။ သူဟာအရမ်းအလေးအနက်ထားဘဝကိုယူသေးသူနားလည်နိုင်ပြီးမိုးသည်းထန်စွာနှလုံးတင်ဆောင်လာသောဘဝကတဆင့်တတ်ကာမျက်မှောင်ကြုတ်နေဖြင့်ဝန်ကိုထမ်းခဲ့သူတစ်ဦးထက်မပိုကောင်းသောဘဝကိုတန်ဖိုးထားထင်သောသူမှာသနားခြင်းနှင့်ရယ်မောစေနိုင်သည်။
သူဖုံးကွယ်ဖို့လျော့နည်းကြိုးစားပါတယ်နှင့်သူ၏ရယ်မောခြင်းအတွက်လျော့နည်းဖုံးကွယ်နိုငျသောကွောငျ့လူဇာတ်ကောင်ပို, သူ့စကားအားဖြင့်ထက်ကသူ့ရယ်မောခြင်းအားဖြင့်အချိန်တိုအတွင်းလူသိများစေနိုင်သည်။ စကားများနှင့်အတူသူနှင့်မကြာခဏသူကပြောပါတယ်အရာကိုဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာဖြစ်ပျက်မှုနှင့်နေရာကိုက်ညီရန်, အမြန်ဖြတ်ထိုးဉာဏ်နှင့်၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်သေံအတွက်စနစ်ဖြစ်ပြီးကောင်းသောဟာသလေးမွတျ၏ရက်ရက်ရောရောရယ်မောခြင်းသူဌေးပြည့်အသံကြိုဆိုပါတယ်မည်မဟုတ်သူမည်သူမဆိုခဲသည်, သူတစ်ဦး၏အချည်းနှီးသော gobble သို့မဟုတ် cackle ရှောင်ဖယ်ရန်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ် စကားသံကယျြအခါသမယကပြောခြင်းငှါဖြစ်စေမသည်, မိမိ cackle သို့မဟုတ် gobble အတွက်ဆက်ရှိနေသေးသူ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ကောင်းစွာရပ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်, စိတ်ကိုသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပြည့်စုံခြင်းသို့မဟုတ်ရေတိမ်ပိုင်းကသူ၏ရယ်ခြင်းဖြင့်လူသိများနိုင်ပါသည်။ ကွောကျဖို့လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူသူတို့ကိုကိုက်ညီသို့မဟုတ်စိတ္တဇနာ, ရယ်မောခြင်း၏အော်သံဖောက်, သူတို့ရဲ့အတိုဆတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့် spasmodic အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသူတို့ကိုပြသ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ရှည်လျားချွန်ထက်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆူညံ, rasping, သတ္တုအသံ, အလေချွန်ခြင်း, squeal အဖြစ်ဧကန်အမှန်ရေတွင်းတစ်တွင်း rounded ဇာတ်ကောင်ရယ်မောခြင်းအတွက်၎င်း၏သဟဇာတအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဖြစ်ဇာတ်ကောင်များ၏ညွှန်ပြကြသည်။ ရယ်မောခြင်းထဲမှာသဟဇာတနေပါစေဟာရယ်မောရံဖန်ရံခါစခွေငျးငှါအဘယျသို့, ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကောင်းစွာထုတ်ဝိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတပြသထားတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စတဦးတည်းသူကင်းမဲ့သောအရာကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားပုံကိုတစ်ဦးဇာတ်ကောင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရယ်မောခြင်းပြပွဲမရှိခြင်းအတွက်စိတ်တိုးပွား။ ဇာတ်ကောင်တီထွင်နေသည်အဖြစ်စိတ်တိုးပွား, ရယ်မောခြင်းထဲမှာသဟဇာတအခွင့်မပေးကြ။ အဆိုပါလေသံ, ထိုအစေးနှင့်ရယ်မောအတွက်စိတ်တိုးပွား၏အသံအတိုးအကျယ်, ဇာတ်ကောင်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မရှိခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်ဖော်ပြသည်။
မိမိအရယ်အတွက်သံလိုက်သူတစ်ဦးကများသောအားဖြင့်သဘာဝနှင့် sensuous သဘောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သွေးဆောင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စကားအားဖြင့်လှည့်ဖြားစေခြင်းငှါသော်လည်းအဆိုပါလိမ္မာသည် ဖြစ်. များနှင့်ကောက်ကျစ်ခြင်းနှင့်ဝန်တိုခြင်းနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်, သူတို့ရဲ့ရယ်မောခြင်းအားဖြင့်တွန်းလှန်ပါလိမ့်မယ်။